जुली 19 – एकातिर मात्र पाकेको! – Elim Glorious Revival Church – Kodambakkam
जुली 19 – एकातिर मात्र पाकेको!
By elimchurchgospel | July 19, 2021 | Appam - Nepali | No Comments
“एफ्राइम जाति-जातिहरूसँग मिसिन्‍छ। एफ्राइम एकातिर मात्र पाकेको रोटीजस्‍तै छ।” (होशे 7:8 )।
यद्यपि इस्राएलमा १२ कुलहरू थिए, तर एप्रैम कुललाई अंकित गर्दै , परमेश्वरले यसलाई ‘एक रोटी’ भनेर परिभाषित गर्नुभयो। यी शब्दहरूले आफैलाई मुल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछन्।
उदाहरणका लागि ‘रोटी’ को सट्टा हामी ‘दोसा’ लाई लिउँ। दोसा बनाउने क्रममा तेललाई तावामा हालेर फैलाइसके पछि हामी दोसाको पिठोको घोललाई हालेर त्यसलाई पनि गोलो रुपमा फैलाउछौँ। यो हल्का आँचको आगोमा मात्र एकै तिर बाट पकाइन्छ। त्यसपछि दोसा तावामा पल्टाइन्छ। त्यसो गर्नाले यो दुबै तिरबाट राम्रोसँग पाकेको हुन्छ र यसले राम्रो स्वाद दिन्छ। यदि यसलाई तावामा पल्टाईएको छैन भने दोसाको एकातिरको भाग काँचो नै रहन्छ।
आत्मिक जीवनका दुई पक्षहरू छन्, दुइ पाटाहरु छन्। एउटा पक्ष भनेको परमेश्वरले हाम्रोलागि गर्नुहुने कुराहरु र अर्को पक्ष हामीले परमेश्वरका लागि गर्नुपर्ने कुराहरु हुन् । केही व्यक्तिहरू परमेश्वरले तिनीहरूका निम्ति के के गर्नुपर्यो भनेर मागीरहन्छन्। तिनीहरूले आशिष, ज्ञान , छुटकारा र ईश्वरीय चंगाई माग्छन। परमेश्वर यी सबै चीजहरू दिन सक्षम हुनुहुन्छ। तर, उनीहरूले परमेश्वरका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू चाहिँ बिर्सेका हुन्छन । सबैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ; परमेश्वरको निम्ति दिनु पर्छ; परमेश्वरका सन्तानको रूपमा बाँच्नुपर्छ। परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ। तर यी व्यक्तिहरूले यी सबै चीजहरूलाई उचित महत्त्व दिएका हुदैनन्। यी ती मानिसहरू हुन् जो राम्ररी पाकेका हुदैनन्।
राजा सुलेमानलाई हेर्नुस त। जब उनले परमेश्वरसंग ज्ञान मागे परमेश्वरले उनलाई बुद्धि त दिनुभयो तर उनलाई धन-सम्पत्ति, महिमा, र अधिकार पनि दिनुभयो जुन उनले मागेका पनि थिएनन्। तर सुलेमानले अरू देवताहरूलाई बलिहरू चढाउनका निम्ति उच्च स्थानहरूको निर्माण गरे र परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याए। यसप्रकार सुलेमान एकातिरबाट मात्र पाकेको रोटी भए।
त्यसैगरी, पवित्रशास्त्रमा अर्को रोटीको पनि उल्लेख छ। “… मैले सपनामा जौको एउटा रोटी मिद्यानीहरूको छाउनीमा गुड्‌दै-गुड्‌दै आएको देखें। त्‍यो रोटी पालमा आएर त्‍यसमा यति जोरसित बजारियो कि त्‍यसले पाललाई पल्‍टाइदियो र पाल ढल्‍यो” (न्यायकर्त्ता :13:१:13)। मिद्यानीहरूको पाललाई पल्टाउनको लागि जौको एउटा रोटी नै शक्तिशाली थियो। किनभने त्यो रोटी दुबै तिरबाट पाकेको थियो।
एकातिर, तपाईं पवित्र आत्माले भरिएको हुनुपर्दछ। अर्कोतिर, तपाईं परमेश्वरको आगोले भरिएको हुनुपर्छ। तपाईंलाई पवित्र बनाउन परमेश्वर तपाईंलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहुन्छ। शत्रुको किल्लाहरू भत्काउनको लागि उहाँले तपाईंलाई आगोको अभिषेक गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरका प्रिय छोराछोरीहरु, तपाईं एकातिर बाट मात्र पाकेको रोटी हुनुहुन्न, तर दुबै तिर बाट पाकेको हुनुपर्छ, तब मात्र तपाईं शत्रुको शक्तिलाई तोड्न सक्नुहुनेछ र विजयी हुन सक्नुहुनेछ ।
मनन गर्नका लागी: ” स्‍वर्गबाट ओर्लिआएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्‍यो सधैँभरि जिउनेछ।” (यूहन्ना 6:51)।